इन्फिनिटी लघुवित्तको नाफामा उछाल : अन्य सूचक के भए ? | शुभयुग
इन्फिनिटी लघुवित्तको नाफामा उछाल : अन्य सूचक के भए ?
१४ वैशाख,काठमाण्डौ – इन्फिनिटी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले चालु आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमासको वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरेको छ ।
संस्थाले सार्वजनिक वित्तीय विवरणअनुसार चालु आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमाससम्ममा १० करोड ४७ लाख २७ हजार रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गर्न सफल भएको छ । गत वर्षको यसै अवधिको तुलनामा यो नाफा १८६.२९ प्रतिशतले बढी हो । गत वर्षको यसै अवधिमा संस्थाले ३ करोड ६५ लाख ८० हजार रुपैयाँ नाफा कमाएको थियो ।
यस्तै उक्त त्रैमाससम्म आइपुग्दा संस्थाको खुद ब्याज आम्दानी ८६.१५% ले बढेर १९ करोड २८ लाख १३ हजार रुपैयाँ पुगेको छ । गत वर्षको यसैअवधिमा संस्थाले १० करोड ३५ लाख ७८ हजार रुपैयाँ खुद ब्याज आम्दानी गरेको थियो ।
संस्थाको सञ्चालन मुनाफा १५ करोड २८ लाख ४६ हजार रुपैयाँ पुगेको छ । यो गत वर्षको तुलनामा १६३.२४ प्रतिशतले धेरै हो । गत वर्षको सोहिअवधिमा संस्थाको सञ्चालन मुनाफा ५ करोड ८० लाख ६३ हजार रुपैयाँमा सीमित थियो ।
हालसम्म चुक्ता पुँजी २६ करोड ६ लाख ५० हजार रुपैयाँ र जगेडा कोषमा १४ करोड ६४ लाख २१ हजार रुपैयाँ छ । यस्तै प्रतिसेयर आम्दानी वार्षिक ५३ रुपैयाँ ५७ पैसा र प्रतिसेयर नेटवर्थ १५६ रुपैयाँ १८ पैसा छ ।